Ama-sonotrode we-Ultrasonic noma ama-probes - Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Ama-sonotrode we-Ultrasonic noma ama-probes"
I-sonotrode iyisengezo esisetshenziswa ngokuhlanganiswa neprosesa ye-ultrasonic ukudlulisa amaza e-ultrasonic / acoustic abe uketshezi. I-sonotrode ikakhulukazi induku ye-conical noma ye-tapered, ebizwa nangokuthi yi-probe ye-ultrasonic, ithiphu, uphondo noma umunwe. Imvamisa eyenziwe nge-titanium, i-sonotrodes / i-ultrasonics kungenjalo ingenziwa kwamanye ama-alloys, i-ceramic noma ingilazi.
Ama-vibrations akhiqizwa yi-processor ye-ultrasonic adluliswa nge-sonotrode isebenza kugesi, uketshezi, uqinile noma izicubu. Ukudilizwa komhlaba oqondile we-sonotrode kubizwa ngokuthi yi-amplitude. Izikhulisi eziphakeme ezikhiqizwe yi-high-Power ultrasound esetshenziselwa izinhlelo eziningi ekwenzeni ucwaningo kanye nomkhakha zifaka i-homogenization, i-dispersing, i-emulsation, i-wet-milling, isizinda, ukuhlakazeka, ukusabela kwe-sonochemical nabanye abaningi.
I-Hielscher Ultrasonics yenza amasayizi e-sonotrode ahlukahlukene namajiyometri. AmaHielscher CascatrodesTM ama-sonotrodes akhethekile okuklanywa kwe-sonication ephumelelayo emazingeni aphakeme we-ultrasonic.